BAPHAWULILE abafundi bethu ngongqimphothwe kahulumeni mayelana nokuvunyelwa ukuba ugwayi uthengiswe esigabeni 4 sokuvalwa kwezwe (lockdown) njengoba ubuye wajika emnyango wathi amaxhwele mawagwInye itshe, ngeke awunuke:- Ilanga News
Home Izindaba BAPHAWULILE abafundi bethu ngongqimphothwe kahulumeni mayelana nokuvunyelwa ukuba ugwayi uthengiswe esigabeni 4...
BAPHAWULILE abafundi bethu ngongqimphothwe kahulumeni mayelana nokuvunyelwa ukuba ugwayi uthengiswe esigabeni 4 sokuvalwa kwezwe (lockdown) njengoba ubuye wajika emnyango wathi amaxhwele mawagwInye itshe, ngeke awunuke:-
Kuqubule indida nokucasuka kwabaningi ukuphikisana kukaMengamel Cyril Ramaphosa noDkt Nkosazana Dlamini-Zuma mayelana nokudayiswa kukagwayi esigabeni 4 sokuvalwa kwezwe (Lockdown).
isithombe ngabe: pexel.com
• Lillian Thobeka: Siyabonga kulowo mnyango kahulumeni, abantu bakagwayi kabanandaba nokuthi babhemelaphi futhi lokho kuyasihlukumeza sonke.
• Celenhle Mntimande Lillian Thobeka: Impela, yiqiniso lokho kuhlukumeza ngisho nezingane.
• Mpume Mpumza Khumalo: Impela, thina nje esisebenzayo njengoba kuvalwe izwe besizofa bo njengoba nje abanye abashayeli bebhema niphakathi etekisini.
• Delani Qwabe Celenhle Mntimande: Kulele kunye, unake abazibulala bona kunokunaka amathumbu akho. Ukhohliswa yilezi zalukazi namakhehla ozelayo ephalamende, wona avula nini ephalamende? Uma ugwayi ungawubhemi ngicela uhlukane nokuba ngumkhulumeli wethu. Khona ingane unayo?
• Celenhle Mntimande: Angisiye umkhulumeli wenu, ugwayi mawuvalwe vele ngoba nibhema phambi kwezingane zethu, mawuvalwe!
• Indangamane Khuzibuya: Vele ngabe ziyavulwa lezi zinto, ukuba khona kwalabo hulumeni kulibulele izwe. Uhulumeni owabuyisa izwe ngokamkhulu uMandela, bonke laba abanye balibulele. Basho kahle ngoba bona balala kahle, umama wami akalali uma ubaba engenawo ugwayi!
• Thiya S Nyandeni Mshedis: Bafuna kuvulwe ugwayi notshwala bathi bazophila, bese kuvalwa izikole unyaka wonke ukuze izingane zabo ziphephe!
• Lucky Sithandwa: Ugwayi notshwala makume nje impela, noma sekuvulwa utshwala kuyomele buvulelwe ngo-10 ekuseni buvalwe ngo-4 ntambama ngoba besesikhathele yizidumbu ezivela ngokudubulana kwabantu ngezinxabano zasetshwaleni ngakusasa ekuseni sekumele singene izinto ebesingazazi.
• Magazi Mcetshwa: Akukuhle ukuthi uhulumeni uhoxise ukudayiswa kukagwayi ngenxa yokuthi ulalele idlanzana labantu.
• Noxolo Mzimkhulu: Awu siyabonga bakithi, uhulumeni wethu wenze umsebenzi omuhle ngokuvala ugwayi. Nibhema yonke indawo ngisho emgwaqweni lapho kugcwele khona abantu. Angifuni nokuyiphatha nje eyezindlu zangasese, bayabhema, baphimisa phansi nezikhwehlela, makuvalwe ngqi. Abamane babheme umsuzwane.
• Bonganie Sibusiso Dlamini: Kuyafana, niyabuvala utshwala nogwayi, kodwa abantu basazofa njengoba besafa nje namanje.
• Minenhle Lovemore Joseph: Angisayethembi into ekhulunywa yilaba bantu, kufike kushiwo into iphinde ijike seyimenyezeliwe ezweni lonke ngumengameli wonke. Ngeke ngisathemba lutho nabo bazididekele nje.
• Simphiwe Malusi: Besebeqalile ukuwuthengisa singazi ukuthi bawuvusaphi. Khona uhulumeni ubusuvele uyidlisile ikilabhu ngokuthi uvumele ugwayi ukuba uthengiswe.
• Babaka Wa EHluhluwe: Okusalayo ukungathengiswa kukagwayi akuyinciphisi ingcuphe yokuthelelana nge-coronavirus, phezu kwalokho uhulumeni kawulwazi udlame olubhekana nabantu emindenini uma umuntu eseqalekele ugwayi. Maningi amacala angavuliwe aba-ngelwa wukuqaleka. Umuntu oqalekile ave enolaka, cabanga-ke ukuthi uzophila kanjani nomuntu ohlala eqalekile.
BAPHAWULILE nangosomatekisi okuthiwa uzilengisile wafa emuva kokuxinwa wukhwantalala kwazise besekunesikhathi ethole ukuthi enye yezingane zomkakheabethi ngeyakhe, iyilongwe, ubanjiswe ibhantshi:-
*Freedom Lindani Khubone: Bafowethu ayahlukumezeka amadoda lapha ngaphandle futhi indaba yawokayinakiwe. Umsebenzi engiwenzayo isikhathi esiningi ngisebenza ngezikhalo mayelana nodlame lwemindeni. Uma sengithola umsuka wendaba kuzona zombili izinhlangothi, ngowesilisa osuke ehlukunyezwa. Sithwele kanzima singabantu besilisa futhi eNingizimu Afrika nomthe-tho wakhona abantu besilisa ubakhiphela ngaphandle.
* TTka Mthiya UMbatha: Sengicabanga nokuvula iMen Divorce of South Africa Association.
* Malinga Ndumo: Sihlukumezeka kakhulu, sizothini ngoba i-ANC yathi masiphucwe ubudoda bethu. Kulungile kodwa ozele ingane yomfana kuyeza nakuye.
* Jabulani Bo Shamase Ndlamlenze Freedom Lindani Khubone: Le nto ibuhlungu ngoba nomthetho uvuna bona. Uma uke wasola ukuthi ingane akusiyo eyakho, usatshiswa ngoma-room ntonintoni! Uma uke wathi makuyohlolwa ulibofuzo (DNA), kuthiwa kulungile kodwa uma kungowakho ngiyakumangalela. Yingakho ngithi kunabantu abadalwa nguMdali ukuba babe ngabantu, bajika baba ngosathane bese kufa izingane zabantu ngenxa yabo.
* Muster MUst: Nezwe selibolile, yingakho uMdali ededela i-coronavirus, inqwaba yezingane zakwe-minye imizi zimemeza kwezinye izibongo.
* Nkunzebovu Mngadi: Niyabona-ke ukuthi amadoda ahlukunyezwa kanjani, aphi amalungelo ethu?
* S’boniso Ngcobo: Ukuhlolwa kolibofuzo makwenziwe kuzona zonke izingane manje, akukhathalekile ukuthi kushadiwe noma cha.
* Thokozani Mdlalose: S’boniso Ngcobo:
Uqinisile bafo, esibhedlela nje ngaphambi kokuthi umama adelwe nengane, makuhlolwe ulibofuzo, singaphela phela yizihlakaniphi eziyizidomu.
* Khuzwayoh Thandeka Phethinsi: Umhlaba uyasabisa.
* Vusi Emmanuel Mnyandu: Sibaningi esiba-njiswe amabhantshi, kodwa masingazibulali ngenxa yezigilamkhuba zabafazi.
* Senzo Buthelezi: Amadoda afile wonke emoye-ni, amanye awasalesabi nejele nokufa kawakwesabi ngoba azibona efile vele.
* Spha Madonsi: Ukube niyabona madoda ukuthi abantu besifazane banjani
Previous articleUkuvalwa kwezwe kulikhulisile ibhizinisi lakhe
Next articleUbonga amaciko ngokumeseka esemanzini